लियोनल मेसीलाई कसरी रोक्ने भनेर प्रशिक्षक र खेलाडीले व्याख्या गरेको भिडियो कसरी भयो भाइरल ? – Jagaran Nepal
लियोनल मेसीलाई कसरी रोक्ने भनेर प्रशिक्षक र खेलाडीले व्याख्या गरेको भिडियो कसरी भयो भाइरल ?
लियोनल मेसी उत्कृष्ट फुटबलरमध्येका एक हुन्। विश्वमा उनको ठूलो फ्यान फलोइङ छ। ६ पटकसम्म बालोन डीओर जितेका मेसीका विषयमा धेरै भिडियोहरु बनेका छन्। तीमध्ये एक भिडियो हाल भाइरल भइरहेको छ। यो भिडियोमा प्रशिक्षक र खेलाडीहरुले मैदानमा मेसीलाई कसरी रोक्न सकिएला भनेर योजना बनाएका छन्।
भिडियो एउटा सानो क्लिपबाट शुरु हुन्छ, जहाँ मेसी विपक्षी खेलाडीहरुबाट घेरिएका हुन्छन्। त्यहाँ मेसीलाई कसरी रोक्नुहुन्छ भनी प्रश्न गरिएको छ। त्यसपछि भिडियोमा विभिन्न प्रशिक्षक र खेलाडीहरुले उक्त प्रश्नको उत्तर दिएको भिडियो क्लिपहरु जोडिएको छ।
रियो फर्डिनाण्ड, जोसे माउरिन्हो, एन्टानिओ कोन्टे, थायगो शिल्भा, अलेक्स फर्गुसन, डिइगो साइमाने, मार्सेलिनो, जोइ हार्ट, अश्ले कोले, भर्जिल भान डिजाक, जर्गेन क्लोप, मार्क भान बोमेल, इरिक लमेला, याया टोर, क्ष्रिक डिएर, अलेस्यान्द्रो नेस्टा, अर्सेने वेङ्गर, म्यानुआल अलमुनीय, पेप ग्वार्डिओला, जेरोम बोयटिङ, माउरिसियो पोचेटिनो, डिइगो फोर्लान्, हिर्भिङ लोजानो, ह्यारी केन, कियरान ट्रिपिएर र गिएन्लुइगी बफनले प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गरेका छन्।
तर उनीहरुले पनि ठ्याक्कै प्रश्नको उत्तर दिन सकेनन्। यदि उनीहरुले उत्तर दिन सकेनन् भने कसले दिन्छ ? मेसीले सातौंपटक बालोन डिओर उपाधि जितेमा उनी विश्व फुटबल इतिहासकै सर्वकालीन महान खेलाडी मानिने बताइएको छ।